म्याग्दीबाट तत्कालिन नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रदेश सभामा विजयी भएकी नरदेवी पुनले अहिले गण्डकी प्रदेशकको सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी छन्। उनी अहिले आफ्नो मन्त्रालयभित्र पर्ने स्वास्थ्यलाई सुधार गर्ने अभियानमा छिन्। त्यसमध्ये पनि महिला स्वास्थ्यका समस्या सुधारमा उनी केन्द्रित छिन्। प्रस्तुत छ, राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर मन्त्री पुनमगरसँग प्रदेशको स्वास्थ्य योजनाका बारेमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
प्रदेश बैठकको पहिलो निर्णय नै ठूला मातृशिशु तथा दीर्घरोग अस्पताल बनाउने थियो। त्यसको प्रगति अहिले कहाँ पुुगेको छ ?
अस्पताल बनाउने निर्णय रोकिएको छैन। कार्यविधि बल्ल आएकाले सबैभन्दा पहिला अस्पताल निर्माण समिति बनाउन लागेका छौं। अस्पतालका लागि उपयुक्त ठाउँ पनि खोजिरहेका छौं।
प्रदेशमा भएका ठूला अस्पताल मनिपाल र क्षेत्रीय विज्ञान प्रतिष्ठानमा बेला¬–बेला विवाद भइरहन्छन्। केही समयअघि मनिपालमा भएको विवाद साम्य हुनै १० दिन लाग्यो। यो त तपाईंहरुकै कमजोरी भएन र ?
अस्पताल प्रदेशमातहत छैन। विवाद रोक्न हामीले कोशिस मात्रै गर्ने हो। कर्मचारी र प्रशासनबीच कर्मचारी निलम्बनका विषयमा भएको विवादले प्रदेशकै ठूलो अस्पताल बन्द हुनु दुखद कुरा हो। अत्यावश्यक सेवा रोकिएकाले धेरै प्रयास गरेर अस्पताल खोल्न बाध्य पारेका हौं। अब त्यस्तो हुँदैन।
त्यसो भए प्रदेशमातहत कस्तो स्वास्थ्य संस्था पर्छ त ?
प्रदेशमातहत के पर्छ मलाई नै थाहा छैन। अहिलेसम्म जानकारी आएकै छैन। विशेषगरी तत्कालिन माओवादी केन्द्र र एमालेको पार्टी एकता घोषणापत्रमा २५ शैय्याको अस्पताल गाउँपालिका र ५० शैय्याको अस्पताल नगरपालिकाको मातहतमा रहने उल्लेख गरेका छन्। जिल्ला अस्पताल प्रायः ५० शैय्याका छन्। त्यसअनुसार नगरपालिका मातहतमै हुन्छ। त्योभन्दा बढी शैय्याको भयो भने केन्द्रमातहत हुन्छ । अहिलेसम्म केन्द्रले प्रदेशमातहत रहने स्वास्थ्यसंस्था तोकेको छैन।
प्रदेशमा केही अधिकार नभएको देखियो। केन्द्र सरकारको यो निर्णयप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त ?
होइन। केन्द्रबाट केही न केही त आउला नि। म के भन्न चाहन्छु भने प्रदेशका ठूला अस्पतालको उपचारात्मक सेवा प्रदेशमातहत रहनुपर्छ। किनभने हामी उनीहरुको सेवाग्राही तथा अस्पतालको नजिकमा हुन्छौं। हाम्रो निगरानी भइराख्छ। त्यहाँ आइपर्ने सेवाग्राही र अस्पतालको समस्या सिधै र सजिलै हामीसम्म आइपुग्छ। त्यसलाई सुधार गर्न पनि धेरै समय लाग्दैन।
बरु प्राज्ञिक सेवा केन्द्रले हेरोस्। संविधानमा प्रतिष्ठानहरु संघमातहत रहने नियम भएकाले अहिलेसम्म त्यस्तै चलिरहेको छ। तर यो विषयमा पुनर्विचार भयो भने प्रदेशले पनि प्रतिष्ठान हेर्न सक्छ।
प्रदेशमा धेरै महिलाको स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या आइरहेका विभिन्न प्रतिवेदनले पनि देखाउँछ। यसलाई सुधार गर्न केही योजना ल्याउनु भएको छ ?
महिला स्वास्थ्यसेवा प्रदेश सरकारको क्षेत्रभित्र र आधारभूत स्वास्थ्यसेवा स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र छ। अहिले महिला स्वास्थ्य समस्यालाई सुधार गर्न अभियान चलाइरहेका छौं। त्यसमा पनि पाठेघरको क्यान्सर कसरी रोक्न सकिन्छ भन्नेमा हाम्रो ध्यान छ। हाम्रोे प्रदेशमा मात्र होइन देशमै धेरै महिला पाठेघरको क्यान्सर भएर मर्नु परिरहेको छ। अन्तिम अवस्थामा आइपुगेर मात्रै जानकारी दिन्छन्। त्यतिबेला उपचार पनि सम्भव हुँदैन। त्यसैले पाठेघर क्यान्सरको अभियानलाई शसक्त बनाउँदैछौं। त्यसका साथै स्तन क्यान्सर तथा मिर्गौलालाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्नेतिर ध्यान दिइरहेका छौं।
महिलाको स्वास्थ्य अवस्था सुधार अभियान प्रदेशको सुगम ठाउँमा मात्रै हो कि दुुर्गममा पनि पुग्छ ?
म के चाहन्छु भने सुरुमा त कार्यविधि हुनुपर्छ। जनतालाई कसरी स्वास्थ्य सेवा दिने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। अतिविपन्न गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगका लागि खास नियम नै बनाएर सहुलियत स्वास्थ्य सेवा दिने विचार गरेका छौं। यसअुनसार ग्रामीण भागमा नै बढी फाइदा पुुग्ने देखिन्छ।
प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास गर्न के¬–के निर्णय गरेको छ ?
प्रदेशकै ठूलो २ वटा अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको छ। त्यसैमा बजेटको व्यवस्था पनि भएको छ। मुटु, मिर्गौला र क्यान्सरको उपचार हुने एउटा अस्पताल र बाल तथा महिलाको उपचार हुने अर्को अस्पताल बनाउने निर्णय भएको छ। अहिले हामी यसैको छलफलमा छौं। अबको बजेटमार्फत् काम सुरु गर्नेछौं।
तपाईंको कार्यक्षेत्र धेरै ठूलो छ। प्रदेशमा भएका स्वास्थ्य क्लिनिक तथा सरकारी अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न र त्यहाँ पूवार्धार पुगे–नपुगेको कसरी अनुगमन गर्नुहुन्छ त ?
चैत १२ गते मात्रै सरकारमा गएँ। सबैभन्दा पहिले यस क्षेत्रका विशेषज्ञसँग छलफल गर्‍यौं। तुरुन्तै मैले २०७४/७५ को बजेट नीति बनाउनुपर्ने भयो। त्यसपछि कार्यनीतिको कुरा भयो। त्यसपछि समिति बनाएर सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ। तुरुन्तै २०७५/७६ को अर्को नीति तथा कार्यक्रममा जुट्नुपर्ने भएकाले अनुगमनमा नै जान भ्याएको छैन।
मैले स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि फरक–फरक कार्यदल बनाएको छु। उहाँहरुले मलाई धेरै कुरा दिनुभएको छ। जिरो बजेटमा सुधार गर्न सकिने कुरा, थोरै बजेटमा सुधार गर्न सकिने कुरा र नियमनका कुरा सबै आएका छन्। आउँदो बजेटपछि म निजी क्लिनिक, अस्पतालको अवस्था, सञ्चालन गर्दा भएका प्रतिबद्धता, देखिएका कमीकमजोरी लगायतका विषयमा अनुगमन गर्छु।
बर्खायाम आइसक्यो। गर्मी पनि बढेको छ। अब झाडापखाला लगायतका महामारी फैलिन्छन्। रोकथामका लागि केही योजना छन् ?
बर्खायाममा फैलिने महामारी रोक्न बजेटको व्यवस्था छ। कार्यविधि पनि बन्ने क्रममा छन्। विपत भनेको बाजा बजाएर आउने कुरा होइन। हामी कहाँनेर कस्तो समस्या आउँछ भन्ने कुरामा पूर्वतयारी अवस्थामा छौं। ‘हाम्रा लागि प्रदेश सरकार छ है’ भन्ने अनुुभूति यहाँका नागरिकलाई गराउँछौं।
प्रस्तुती: विकास रोका मगर/पोखरा